ဒီနေ့သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကပြောပြလို့pdf file ထဲမှာ ရေးထားတာတွေကို နားထောင်လို့ ရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မ အဲ့လို နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတာကို အရင်က လုံးဝမသိဘူး။ ဒီနေ့ မှပဲ သိတော့တယ်။ စမ်းကြည့်တော့ မဆိုးဘူး။ တစ်ခြား ဘာမှ install လုပ်စရာ မလိုပဲ နားထောင်လို့ ရတယ် ဆိုတာ တော်တော် မိုက်တယ်။ မြန်မာလို ရေးထားကို ဆိုရင် ဘယ်လို နေမလည်းလို့စမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်။ နားထောင်လို့မရဘူး။ သူတို့မြန်မာလို ရေးထားတာတွေကိုမှ နားမလည်တာ။ ကျွန်မ စမ်းကြည့် သလောက်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတာတွေ ကိုတော့ သေချာနားထောင်လို့ ရတယ်။ စာဖတ်ပျင်းတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ အတော်ကောင်းတဲ့ feature တစ်ခုပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ ဖတ်ပြတဲ့ သူရဲ့အသံကြီးကိုတော့ ကျွန်မ မကြိုက်ဘူး။ အသံကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဖတ်ပြတယ်ဆို ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိုက်မလဲ။ဒါလေးကို စမ်းကြည့်ပြီး၊ နောင်တစ်ချိန် ချိန်မှာ.. ဘယ်သူကများ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ file တွေကို နားထောင်လို့ ရအောင် တီထွင်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း သိချင်နေပြန်တယ်။ အဲ့လို တီထွင်မယ့်လူဟာ ကျွန်မ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကိုလည်း ကျွန်မ အသေအချာသိနေ ပြန်ပါတယ်။ You can listen to any PDF file instead of reading. Note that this feature works with Adobe Acrobat Reader 6.0 or7.0, and the short cut is: * Ctrl+Shift+B - to hear the entire document* Ctrl+Shift+V - to hear the page* Ctrl+Shift+C - to resume* Ctrl+Shift+E - to stop If the audio is not clear for hearing/understanding or because the voice is slow or fast, you can adjust the diction using the adjustment in Voice Speed of Text to speech tab from Settings > Control Panel > Speech.
တစ်ကယ် စိတ်ကုန်တယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတာတော့ ဒီ မှာ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ဒါတစ်ကယ်ပဲလား။ ဒီကိစ္စတွေ ကြားနေတာတော့ ကြာပြီ။ ဒါတကယ်ပဲဆို ဒီတစ်ခုနဲ့ ရပ်မယ် မထင်ဘူး။ နောက်ဘာတွေများ ရောင်းဦးမလဲ။ ရန်ကုန်မှာ အထင်ကရ နေရာတွေ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ အကုန်လုံးများ ရောင်းတော့မှာလား။ ဒါတွေကို ဘယ်သူတွေကမှ မတားဆီးနိုင် ကြတော့ဘူးလား။ မတားဆီးချင်ကြတော့ ဘူးလား။ငါကိုယ်တိုင်ကရော။ မနှစ်သက်ပေမယ့် တွန်းလှန်ဖို့မဝင့်ရဲ သူတစ်ယောက်လား။ ငါတို့နိုင်ငံမှာ ငါလို လူတွေ က အများစုဖြစ်နေတယ် ထင်ပါရဲ့။ ငါတို့ အတွက် ဘာလို အပ်နေလဲ။ဒီအတိုင်း ဆက်သွားနေမယ် ဆိုရင် .......Source : DVB
8/30/2006 09:50:00 AM
ဒီအားလပ်ရက် ဘလောခ့်တောင် မဝင်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနှစ်ရက်လုံး ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး ကြည့်နေတာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် လောက်ကဆို အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ရက်တွေမှည ညတိုင်း ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တယ်၊ နောက် အားလပ်ရက် ရောက်ရင် အဲ့ဒီဟာတွေ ကြည့်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြိုက်လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ် ဆိုတာကလည်း တစ်နေရာတည်း ထိုင်ပြီး ကြည့်နေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်ရင်း ကွန်ပြူတာနဲ့ရုပ်ရှင်ကို ဖွင့်ထား လိုက်တာ။ တစ်ချို့ရုပ်ရှင်တွေဆို ဇတ်လမ်းကို သေချာသိဖို့ ဆို့အနည်းဆုံး နှစ်ခါ၊ သုံးခါလောက်ကြည့်မှ သိတယ်။ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်နဲ့ ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကသာ ပြီးသွားတယ်၊ ကျွန်မကတော့ ဘာတွေပြသွားမှန်း မသိလိုက်ဘူး။ အဲ့ဒီတုန်းကဆို တစ်ပတ်ကို မနည်းဆုံးတော့ ရုပ်ရှင် ၄ကား၊ ၅ ကားပြီးအောင် ဒေါင်းလုပ် လုပ်လေ့ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်မရဲ့ အစ်ကို ဒီရောက်လာတော့ ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းလုပ် မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ပြီခဲ့တဲ့ အပတ်က ဒေါင်းလုပ် လုပ်ဖို့ လိုတဲ့ software တွေကို ပြန် install လုပ်ပြီး ရုပ်ရှင်တွေ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ဖြစ်ပြန်တယ်။ ဒါနဲ့ဒီင်္အားလပ်ရက်တော့ ရုပ်ရှင် ကြည့်ဖြစ်တယ်။ မဆိုးဘူး၊ မကြည့်တာ ကြာလို့လားမသိဘူး ခုပြန်ကြည့်ဖြစ်တော့ စိတ်ဝင်တစားနဲ့အားလုံးပြီးအောင် အစ၊အဆုံး ကြည့်ဖြစ်တယ်။ စနေ နေ့ ကြည့်လိုက်တာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားတဲ့English ကားတွေ ကုန်သွားတယ်။ ၂ ကားပဲ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားမိတာကို။ ဒါနဲ့မနေ့ ကတော့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုကို website က ဒေါင်းလုပ် ပြီးကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်မက ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မနေ့ကကြည့်တဲ ဇတ်လမ်းတွဲကိုတော့ နည်းနည်း သဘောကျသွားတယ်။ နောက်မှ ကျွန်မ နဲ့ကိုရီးယား ဇတ်လမ်းတွေ အကြောင်း စိတ်ပါရင် ရေးဦးမယ်။အချိန်ကုန်တာကလည်း၊ မြန်လိုက်တာ။ အားလပ်ရက် နှစ်ရက်ဆိုတာ ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်း မသိလိုက်ဘူး။ ရုပ်ရှင် ကြည့်စရာတွေက ကျန်သေးတယ်။ ကြည့်ချင်တဲ့ကားတွေ အများကြီးတွေ့ ထားတယ်။ ခုလည်း အလုပ်မှာ၊ အလုပ်လုပ်ရဦးမယ်။ ဒီအလုပ်ဖွင့်ရက် တွေတော့ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ဒေါင်းလုပ်လောက်တော့ လုပ်နိုင်ကောင် ပါရဲ့။ နောက်တစ်ပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်မှပဲ ကြည့်တော့မယ်။
8/28/2006 11:42:00 AM
ကျွန်မရဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်က ပြောလို့ဒီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေအတွက် pass နောက်တစ်မျိုး ထပ်ပေးမယ် လို့သိရပါတယ်။ကျွန်မ ဒီကို စရောက်တော့ WP, EP Q1 , EP Q2, EP P ဆိုပြီး ရှိခဲ့တယ်။ နောက်တော့ EP Q1 ကို ဖြုတ်ပြီး S Pass ဆိုတာကို လုပ်တယ်။ ခုနောက်တစ်ခု PEP ဆို ထပ်လုပ်ပြန်ပြီ။ ကျွန်မ ရဲ့ အစ်ကို ပေးတဲ့ လင်ခ့်က စာတွေကို ဒီမှာ ထပ်ဆင့်ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဖတ်လို့ ရအောင် MOM က လင်ခ့်ကိုပါ ဒီပိုစ့်မှာ ပေးထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်အချိန်ရမှ ကျွန်မသိတဲ့ ဒီမှာ လျှောက်လို့ ရတဲ့ pass တွေ အကြောင်းရေးပါဦးမယ်။ ခုအလုပ်မှာဆိုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။Personalised Employment Pass from January to attract and retain foreign talentA new scheme has been announced to help Singapore better attract and retain global talent.From January next year, foreigners who have been working here forafew years and earn at least $30,000ayear will be eligible foranew Personalised Employment Pass (PEP).The Manpower Ministry says with the new pass, the foreign talent will no longer be tied to an employer.It would be issued based on the workers' own merits and they do not need to reapply foranew one when they change jobs.The pass, which is valid for5years and non-renewable, allows them to stay in Singapore for up to6months in between jobs.Current P1, P2 and Q1 employment pass holders who meet the criteria can apply for the new pass.For other foreign workers who are not eligible, the current employment pass will remain. - CNA/irChannelNewsAsia : Personalised Employment Pass from January to attract and retain foreign talentMinistory Of Manpower : Specifics on the PEP
8/24/2006 04:58:00 PM
အလုပ်မှာ ဒီနေ့မန်နေဂျာမ ကမေးတယ်။ အလုပ်ထွက်မှာ သေချာသွားပြီလားတဲ့။ သြော် ခက်ပါလားနော်။ ထွက်စာတင်ပါတယ်ဆို မှတော့ အလုပ်ထွက်မှာ သေချာလို့ ပေါ့။ သူထူးထူးဆန်းဆန်း မေးတာလေးကို ပြောရဦးမယ်။ မပြောခင် ဒီက ထုံစံလေး တစ်ချို့ ပြောပြမယ်။ ဒီမှာ အလုပ်ထွက်ချင်ရင် ချက်ချင်းထွက်လို့မရဘူး။ ဒီလိုပဲ ကြိုပြောပြီးမှ ထွက်လို့ ရတယ်။ ခု ကျွန်မ လက်ရှိ အလုပ်က အလုပ်ထွက်မယ်ဆို ၂ လ ကြိုပြောရမယ်။ ဥပမာ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှာ ထွက်စာတင်ရင်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် အထိ ဒီအလုပ်မှာ လုပ်ရမယ်။ နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ မှာ အလုပ်မလာချင်တော့ဘူးဆိုရင် သူတို့ ကို ၁ လစာ လျှော်ကြေးပေးရမယ်။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေတော့ မသိဘူး ဒီမှာကတော့ အဲ့လိုပဲ။ တစ်ချို့အလုပ်တွေမှာတော့ ၁ လ ပဲကြိုပြော ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လုပ်တဲ့အလုပ်မှာဆို ၃ လ တောင် ကြိုပြောရတယ်တဲ့။ တော်တော် မလွယ်တဲ့ နိုင်ငံပဲ။ ဒါပေမယ့် ခွင့်လက်ကျန်တွေ ရှိသေးရင်တော့ ကျန်တဲ့ ခွင့်ရက်နဲ့ တွက်ပြီး စောထွက်လို့ ရတယ်။ ကျွန်မအလုပ်ထွက်စာမတင်ခင်က မန်နေဂျာကို သွားမေးတယ်။ ကျွန်မမှာ ခွင့်ရက် ၁၂ ရက်လောက် ကျန်သေးတယ်၊ ထွက်စာတင်ရင် အဲ့ဒီ ရက်တွေတွက်ပြီး စောထွက်လို့ရမလားပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ သူက ဘာပြန်ပြောလဲ၊ သိလား။ စောထွက်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးတဲ့လေ။ စာချုပ်မှာ ၂ လ ကြိုပြောရမယ်ဆို ထွက်စာတင်ပြီး နောက်၂ လ ပြည့်တဲ့ နေ့အထိ ဒီမှာ လုပ်ရမယ်တဲ့။ ကျန်တဲ့ ခွင့်ရက်တွေကို ပိုက်ဆံပေးမယ်တဲ့။ ဒါအလုပ် ပြောင်းလို့မရအောင် တမင်လုပ်တာ။ ဒီမှာက အလုပ်လျှောက်ရင် အလုပ်အသစ်က အလွန်ဆုံး ၁လ လောက်ပဲ စောင့်ချင်ကြတာ။ ကိုယ့်ဟာကို လျှော်ထွက်ဖို့ဆိုတာကလည်း တော်တော်မလွယ်တဲ့ ကိစ္စ။ အလုပ်အသစ်က လခက ဒီလက်ရှိအလုပ်ထက် ၂ဆ လောက်ရ ရင်တော့ ၊ ဘာအရေးလဲ၊ လျှော်ထွက်မှာပေါ့။ လခ ၂ဆ တိုးရဖို့ဆိုတာက ခက်တယ်။ အလွန်ဆုံးတိုးလှ ၇၀၀/၁၀၀၀ ပေါ့။ ဒီတော့ ဘယ်သူမှ လျှော်ထွက်လေ့ မရှိကြဘူးလေ။ ဒီတော့ ကျွန်မလည်း ထွက်စာတင်ခဲ့ တယ်လေ။အဲ့ဒီတုန်းက သူတို့က ကျွန်မ အလုပ်အသစ် အရင်လျှောက်တာ ရပြီး၊ ထွက်စာလာတင်တယ် ထင်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ခွင့်တွေကို သုံးခွင့် မပေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အဲ့လို မှ မဟုတ်တာ။ ထွက်စာ အရင်တင်ပြီး၊ နောက်မှ အလုပ်ရှာမှာ။ မိုက်တယ်ပဲ ပြောမလား။ ၂ လ အပြည့် အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ စိတ်တိုတိုနဲ့ထွက်စာ ကောက်တင်လိုက်တာ။ မထူးဘူးလေ။ ထွက်မယ်က ဆုံးဖြတ်ထားပြီပဲ။ အရမ်းမက်မော စရာလည်း ဒီအလုပ်မှာ ဘာမှ မရှိတာ။အင်း ခုမှ ပြောချင်တဲ့ ကိစ္စ ရောက်တော့ တယ်။ နိဒါန်ပျိုးနေတာ တော်တော်များသွားတယ်။ ဒီနေ့မန်နေဂျာ က မနက်စောစော အလုပ်ရောက်ရောက်ခြင်း ဘာပြောလည်း ဆိုတော့ ကျွန်မဘာတွေ လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားလဲက စ မေးတယ်။ သူ့ ကိစ္စမှမဟုတ်တာ၊ ကျွန်မလည်း ဖြေချင်စိတ် သိပ်မရှိတာနဲ့ဘာကိုမေးတာလဲလို့ထပ်မေးလိုက်တော့ အလုပ်ရပြီလားတဲ့။ ကျွန်မက ဒီအလုပ်မှာ နောက်ဆုံးကျွန်မ လုပ်ရမယ့် နေ့ ကိုပြောပြီး၊ ငါ အဲ့ဒီနေ့ အထိ ဒီမှာ လုပ်ရဦးမယ်လို့ ၊ အဲ့ဒီနေ့ပြီးရင်တောင် ငါက အလုပ် အသစ်ချက်ချင်း ဝင်ချင်မှ ဝင်မှာ ၊ ငါ့နိုင်ငံ ခဏပြန်ရင်ပြန်မှာ၊ ခု အလုပ် ရှာတောင်မရှာ သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ သူက ထပ်မေးတယ်။ အလုပ်ရ သေးဘူးလားတဲ့။ ကျွန်မလည်း သေချာအောင်ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ စပြီး ရှာကို မရှာသေးတာလို့ ။ အဲ့ဒီတော့ ဘာပြောလည်း သိလား။ ဟင်း... ကျွန်မကို လိုချင်တယ်ဆို ခွင့်တွေကို သုံးပြီး အလုပ်ကနေ စောထွက်ခွင့် ပြုပါတယ်တဲ့။ ဘယ်နေ့ မှာ ထွက်လို့ရတယ်ပေါ့။ ကျွန်မလည်း ဟုတ်လား။ ကျေးဇူးပဲပေါ့။ ပြီးတော့ ဘာဆက်ပြောလည်း ဆိုတော့ သူတို့ဒီအလုပ်မှာ ကျွန်မလုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ကျွန်မတစ်ယောက်ပဲသိတယ်၊ နောက်ပြီး ဒီဟာကလည်း ပြီးတော့မှာ ဆိုတော့ နောက်ထပ် လူသစ်လည်း ထပ်မငှါးချင်ဘူး၊ အရမ်း အရေးမကြီးရင် နိုင်ငံမပြန်ပဲ ဒီမှာ အချိန်ပိုင်းဆက် လုပ်ပေးပါပေါ့။ ကျွန်မလည်း သူပြောတာ နားထောင်ပြီး တော်တော် အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ခွင့်ကို သုံးပြီး စောထွက်ခွင့် ပြုတယ်လည်းပြောသေးတယ်၊ ပြီးတော့ အချိန်ပိုင်း ဆက်လုပ်ပေးပါလည်း ပြောသေးတယ်။ ဒီမှာ တစ်ခုပြောဖို့ ရှိတာက ဒီအလုပ်မှာ အချိန်ပိုင်းဆိုတာ မနက် ၈ နာရီ၊ ညနေ ၆ နာရီ အထိလုပ်ကြတာ။ လခ နဲ့မပေးပဲ နာရီနဲ့ တွက်ပေးတာလေ။ မလာတဲ့ နေ့လခမရဘူး။ ကျွန်မ တစ်ခြားသူတွေ အချိန်ပိုင်း လုပ်တာ မြင်နေတာက တော့ အဲ့လိုပဲ။ ကျွန်မလည်းပြောလိုက်တယ် ငါက အလုပ်ရ ရင် ဘယ်လို လုပ် ဒီမှာ အချိန်ပိုင်းလာလုပ်နိုင် မလဲ လို့ ။ အဲ့ဒီ တော့ သူကပြောတယ် မရခင် လာလုပ်ပါတဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီမှာ အချိန်ပိုင်း ၃ လလောက်လုပ်စေချင်တယ်တဲ့။ သူဒါလေးပဲ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပေါ့ ။ ပြီးတော့ ချက်ချင်းအဖြေ မပေးပါနဲ့ ဦးတဲ့၊ စဉ်းစားပါဦး၊ နောက်မှ သူ့ကို အဖြေပေးပါတဲ့လေ။ ဒီနေ့တစ်နေ့ လုံး ကျွန်မ စဉ်းစာကြည့်နေတယ်။ ဒီလောက် လုပ်စေချင်နေရင် ဘာလို့ခွင့်တွေကို သုံးပြီး စောထွက်ခွင့် ပြုတာလဲ။ ကျွန်မရဲ့ ခွင့်တွေကို သုံးခွင့်ပေးရင် ကျွန်မက ဒီအလုပ်ကနေ ၃ပတ်လောက် စောထွက်လို့ရတာ။ ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် နိုင်ငံမပြန်သေးပဲ ဒီက ဟာတွေ ပြီးအောင် လုပ်ပေးပါတဲ့။ ဒါဆို ကျွန်မ ဒီကနေ ခွင့်တွေသုံးပြီး အလုပ်စော ထွက်ခွင့် ပေးတယ် ဆိုတာ ဘာလဲ။ ကျွန်မ အတွက်တော့ ဘာမှ အကျိုးမရှိဘူးလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့အတွက်တော့ ထူးတဲ့ပုံပဲ။ ကျွန်မ အချိန်ပိုင်း သာဒီမှာ လုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ကျွန်မကို ပေးရတဲ့ လခ အများကြီး သက်သာသွားပြီ။ ဘယ်နည်းနဲ့ မှ ကျွန်မ ခုရနေတဲ့ လခလောက်ကို ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ အချိန်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတာ ပုံမှန်လုပ်သလောက်တော့ ဘယ်ပေးပ မလဲ။ တစ်ခြားသူတွေ တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ ပုံမှန် လခထက် အများကြီး လျှော့ပေးတာပဲ။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ အိုင်ဒီယာပဲနော်။ အား.. ဒီလောက်ပဲ တော်ပြီ။ ရေးရတာ တော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီ။ ဘာလုပ်ရမလဲ နောက်မှ စဉ်းစားပြီး ဘာတွေဖြစ်လဲ နောက်မှ ရေးတော့မယ်။ ကောင်းသော ညပါ။
8/23/2006 11:10:00 PM
Bob Dylan ကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ နားဆင်ဖို့ ...ဒီဗားရှင်းက 1965 ကဆိုထားတာနော်.. BlackMoore's Night ရဲ့ MTV ကို ရှာနေတာတော့ မရသေးဘူး။ YouTube မှာရှာကြည့်တာတော့ ကျွန်မလိုချင်တဲ့ ဗားရှင်းမရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တွေ့ မှပဲ ဒီမှာ လာပိုစ့်လုပ်တော့မယ်။
8/23/2006 11:20:00 AM
ကျွန်မ ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ဒီသီချင်းကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် လောက်က စတင် နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ တာပါ။ ဒီသီချင်းကို ပြန်နားထောင်ဖြစ်တိုင်း သူငယ်ချင်းတွေကို အသိရမိတယ်။၂၀၀၁ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ စုနေကြတဲ့အချိန်၊ သီချင်းအရမ်းကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အဲ့ဒီ အခွေကိုဝယ်လာတယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတော့ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်တစ်စုလုံး ဘယ်သူမှ BlackMoore's Night ဆိုတာကို မကြားဘူးခဲ့ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ ဝယ်လာတဲ့ အခွေကိုယူပြီး နားထောင်ရင်းကနေ အဲ့ဒီ အခွေလေးကို ကြိုက်သွား ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအခွေမှာ MTV တစ်ပုဒ်လား၊ နှစ်ပုဒ်လား မသိဘူး လက်ဆောင် အဖြစ်ပါသလိုပဲ။ အဲ့ဒီထဲက ခု ကျွန်မတင်ထားတဲ့ သီချင်းရဲ့ MTV လေးကို ကျွန်မတို့အားလုံး အရမ်းကြိုက်၊ အမြဲနားထောင် ဖြစ်သွားခဲ့ ကြတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် ကြိုက်ကြလည်းဆို အဲ့ဒီ သီချင်း MTV ကို ၂၄ နာရီလုံး လုံးဝ ရပ်နားခြင်းမရှိ ၊ ရက်ပေါင်းများစွာ ဖွင့်ပြီး နားထောင်ခဲ့ကြဘူးတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်က ရှင်တို့ သာ ကျွန်မတို့ နေတဲ့ အိမ်ကို လာလယ် ဖြစ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် အခန်းတိုင်းမှာ ဒီသီချင်းဖွင့်ထားသံ တိုးတိုးလေးကို ကြားမိမှာ သေချာပါတယ်။အဲ့ဒီ သီချင်းရဲ့ မူရင်းအဆိုတော်က BlackMoore's Night မဟုတ်ပါဘူး။ BlackMoore's Night က ပြန်ဆိုထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ စပြီး နားထောင်ဘူးတာက BlackMoore's Night ဆိုတဲ့ ဗားရှင်းပါ။ ဒီနေ့မနက်တော့ THKZ က ပို့ပေးတာနဲ့အရင် အဆိုတော်ဆိုထားတဲ့ ဗားရှင်းကို နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ခုလုံးကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ရသတစ်မျိုးစီပေးသလိုပဲ ။ဒီမှာ ဗားရှင်း နှစ်မျိုးလုံး ကို နားထောင်ချင်ရင် နားထောင်လို့ ရအောင်၊ download လုပ်ချင်ရင်လည်း download လုပ်လို့ရအောင် ပေးထားပါတယ်။ နားထောင်ကြည့်ကြပါ။ ဒီသီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရင် ကျွန်မ တစ်ခုလောက်တော့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူ ဆိုထားတာကို ပိုကြိုက်တယ် ဆိုတာလေးကို ပြောပေးနိုင်ရင် ပြောခဲ့ပေးစေချင်ပါတယ်။ မကြိုက်တဲ့ သူများကိုတော့ ဘာလို့ မကြိုက်လဲ လို့မမေးလိုပါဘူး။Bob Dylan - Times They Are A Changin'BlackMoore's Night - Times They Are A Changin'Come gather 'round peopleWherever you roamAnd admit that the watersAround you have grownAnd accept it that soonYou'll be drenched to the bone.If your time to youIs worth savin'Then you better start swimmin'Or you'll sink likeastoneFor the times they are a-changin'.Come writers and criticsWho prophesize with your penAnd keep your eyes wideThe chance won't come againAnd don't speak too soonFor the wheel's still in spinAnd there's no tellin' whoThat it's namin'.For the loser nowWill be later to winFor the times they are a-changin'.Come senators, congressmenPlease heed the callDon't stand in the doorwayDon't block up the hallFor he that gets hurtWill be he who has stalledThere'sabattle outsideAnd it is ragin'.It'll soon shake your windowsAnd rattle your wallsFor the times they are a-changin'.Come mothers and fathersThroughout the landAnd don't criticizeWhat you can't understandYour sons and your daughtersAre beyond your commandYour old road isRapidly agin'.Please get out of the new oneIf you can't lend your handFor the times they are a-changin'.The line it is drawnThe curse it is castThe slow one nowWill later be fastAs the present nowWill later be pastThe order isRapidly fadin'.And the first one nowWill later be lastFor the times they are a-changin'.
ဒီ အလုပ်ပိတ်ရက်မှာ ကိုယ့်ဘလောခ့်ကို ပိုစ့်လုပ်ဖို့ မအားဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီရက်ပိုင်း ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်သလဲ။သောကြာနေ့ ညနေ က အလုပ်ကနေ ညစာကျွေးလို့ သွားစားတယ်။ ကစားပွဲတွေ လုပ်ပြီး ကစားကြတယ်။ သူများတွေကြည့်ရတာ တော်တော်ပျော်နေ သလိုပဲ။ ကျွန်မ အတွက်တော့ ပျော်စရာ မကောင်းပါဘူး။ ဒါနဲ့၈ နာရီ ထိုးတော့ ပြန်လာလိုက်တယ်။ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ခေါ်တာနဲ့အိမ်မပြန်ဖြစ်ပဲ မြို့ ထဲရောက်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်သွား၊ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ပြီ ကော်ဖီသောက်ရင်း စကားပြော နေလိုက်တာ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ည ၁၂ ကျော်နေပြီ။ ဒါ ၁၀လ ကျော် အတွင်း ပထမဆုံး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ညဘက် အပြင်ထွက်၊ ကော်ဖီဆိုင်မှာ စကားထိုင်ပြော ဖြစ်ခြင်းပဲ။စနေ နေ့ညနေက ဆံပင်ညှပ်ဖြစ်တယ်..အဲ့ဒီ ကိစ္စ လုပ်မယ် စဉ်းစားနေတာ ကြာပြီ။ စနေ နေ့ ကမှ တစ်ကယ်လုပ်ဖြစ် သွားတော့တယ်။ နောက်ဆုံး ဆံပင်ညှပ်ထားတာ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၅ က။ မညှပ်တာ ၈လလောက်ရှိပြီ ဆိုတော့ ဆံပင်ကတော်တော်ရှည်နေပြီ။ ကျောလယ်လောက် ရောက်နေတာကို ပခုံးလောက်ပဲ ကျန်အောင် ညှပ်လိုက်တယ်။ ဒီလောက် တိုအောင်ညှပ်ဖို့ ဟာကို တော်တော်ပြော လိုက်ရတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သွားတာ သူငယ်ချင်း က အဖော်လိုက်ပေးတယ်။ ဆိုင်ရောက်တော့ ဆံပင်ညှပ်ပေးမယ့် သူကမေးတယ် ဘယ်လိုပုံစံ ညှပ်မှာလဲ တဲ့။ ရွေးထားတဲ့ ပုံစံပြလိုက်တော့ ကျွန်မ့ ဆံပင်က ပျော့လွန်းတယ်။ အဲ့လို ပုံထွက်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ကိစ္စ မရှိဘူး နမူနာပုံအဖြစ်သာ ပြတာ အဲ့လောက် တိုရင်ပြီရော တူတူမတူတူ အဲ့လို ပုံသာညှပ်လိုက်လို့ ပြောတာကို သိပ်လက်ခံချင်ပုံ မပေါ်ဘူး။ သူကညှပ်လို့ ပြီးပြီဆိုလို့ကြည့်လိုက်တာ ကိုယ့်မျက်စိထဲတော့ သိပ်မတိုဘူးလိုပဲ။ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လို ထင်လဲလို့မေးတော့ သူက ထပ်တိုမလားတဲ့၊ တိုချင်ရင် တိုလို့ရလောက်သေးတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ဆံပင်ညှပ်တဲ့သူကို ထပ်တို ပေးပါဦးလို့ ပြောတာကို .. သူက ဒီအတိုင်း ကောင်းပါတယ်၊ အရမ်းတိုသွားရင် ပြန်ရှည်ချင်လို့မရဘူးနော်တွေ လာလုပ်နေတယ်။ ရတယ် ကိစ္စမရှိဘူး ညှပ်သာညှပ်လို့ပြောမှ ရတော့တယ်။ ဒါတောင် အရှည်လေးက လှတယ်၊ ဘာညာ ဆက်ပြောနေသေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သူပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ပထမ သူညှပ်ပေးထားတဲ့ နည်းနည်း ရှည်တာက ပိုလှတယ်။ ဆံပင်ကို ဂရုတစိုက်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်သာသိတယ်။ ဒီမှာက ခုတလော အရမ်းပူတယ်။ ဆံပင်ရှည်နဲ့ဆိုနေ့ တိုင်း ခေါ်င်းလျှော်ဖို့ က မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆံပင်ကို ဂရုစိုက်နေဖို့ ကလည်း စိတ်မရှည်ဘူး။ဆံပင်ညှပ်ပေးတဲ့ တစ်ယောက်က သဘောကောင်းပါတယ်။ ပထမတုန်းက စကားသိပ်မပြောဘူး။ နောက်ထပ် တိုပေးပါပြောလိုက်မှပဲ ဘာလို ဒီလောက်တိုချင်တာလဲ၊ ပုံစံပြောင်းချင်လို့ လား ၊ အရင် ဆံပင်ပုံ ထားတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ မေးတော့တာတယ်။ မြန်မြန်စကားပြတ်အောင် မလှလည်း ကိစ္စ မရှိဘူး၊ ပူလို့ဆံပင်တိုတို ညှပ်ချင်တာလို့ ပဲ ပြောလိုက်ရတော့တယ်။ အားလုံးလည်းပြီးရော ကျွန်မကို ဆံပင်စည်းပုံ စည်းနည်းတွေ လာပြော နေသေးတယ်။ ပူတယ်ဆို ခုသူညှပ်ပေးလိုက်တဲ့ ပုံစက စည်းထားလို့ရတယ်ပေါ့၊ စည်းထားမယ်ဆို ဘယ်လိုလေး စည်းထား၊ လှတယ်။ ဟိုပုံစံမစည်းနဲ့မလိုက်ဘူး။ အိုး... စုံသွားတာပဲ။ အားတောင် နာသွားတယ်။ ကိုယ်က ဒီလောက် စိတ်ရှည်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာပဲပြောပြော စိတ်ကူး ပေါက်တဲ့နေ့ မှ သူပြောသလို စည်းကြည့်အုံးမယ်။ လှမလားလို့။ဒါပြီးတော့ သူငယ်ချင်းက စာအုပ်ဝယ်စရာရှိတယ်။ ဖုန်းကပ်ဝယ်မယ်ဆို လို့သွားဝယ်ဖြစ်တယ်။ တစ်လက်စတည်း စားစရာ နည်းနည်းဝယ်တယ်။ ဝယ်စရာရှိတာ တွေဝယ်ပြီး ညစာ သွားစားဖြစ်တယ်။ ကျွန်မကျွေးတာမဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းက ဝယ်ကျွေးတာ။ သူခမျာ ကျွန်မ ဆံပင်ညှပ်တာလည်း လိုက်ပေးရသေးတယ၊် ညစာလည်း ဝယ်ကျွေးသေးတယ်။ တော်တော် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းပါပဲ။ ပြီးတော့ ထုံစံအတိုင်း ညစာ စားပြီး အိမ်တန်းမပြန်သေးဘူး။ ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လိုက်လုပ်ကြတာပေါ့။ နောက်တော့ skirt တစ်ထည်ဝယ်ဖြစ်တယ်။ ဝယ်တော့ ဝယ်လိုက်တယ်၊ ဘယ်တော့များမှ ဝတ်ဖြစ်မလဲ မသိဘူး။ကျွန်မရဲ့ ဆံပင်က ဘယ်လောက်ညှပ်ညှပ် ဒီပုံပဲ ထွက်နေသလား မသိဘူး။ အိမ်ရောက်တော့ အစ်ကို ကပြောတယ်။ ဒါဆံပင်ညှပ်လာတာ လားတဲ့။ ဟုတ်တယ်လေ ဆိုတော့၊ ဒီတိုင်းလိုပါပဲတဲ့ ။ ဘာမှလည်း မထူးပါဘူးတဲ့။ စိတ်ကို ညစ်သွားတာပဲ။ THKZ ကလည်းပြောတယ်၊ ဘာမှ မထူးဘူးတဲ့။ သူ မြင်နေရတာတော့ နဂိုပုံလိုပဲတဲ့ရှင်။ ကျောလယ်လောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်ကို ပုခုံးလောက် ဖြစ်အောင်ညှပ် ထားတာကို ဘာမှ မပြောင်လဲဘူး ဆိုတော့၊ ဘယ်လိုများကြမှ ပြောင်းလည်းသွားတယ် ပြောကြမလဲ။ ဂတုံး တုံးလိုက်ရင်ရော... ပြောင်သွာမလား။ အဲ့လိုတော့ မမေးရဲဘူး။ အစ်ကိုရော THKZ ရောက တားမယ့် သူတွေမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ ကို သွားမေးလို့ ကတော့ ဂတုံးလား၊ တုံးသာ တုံးလိုက်၊ မတားပါဘူးလို့ပြောကြမယ့် သူတွေကြီးပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကစနေ နေ့ ။တနင်္ဂနွေနေ့ ကတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ တစ်နေလုံး စကားပြော၊ စာဖတ်၊ အိပ်... ဒါနဲ့ ပဲ တစ်နေကုန်သွားတာပါပဲ။ အပြည့်အဝ အနားယူတယ်ပေါ့။ဒီလောက်ပါပဲ။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားမရှိပါဘူး။
ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ သီချင်းစာသားကိုတော့ ချစ်သူဖတ်ဖို့သီချင်းကို နားထောင်ပြီး ကျွန်မကြားသမျှ ကြိုးစားရေးသားထားခြင်းဖြစ်လို့အမှားအယွင်းများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းကို မျှဝေပေးတဲ့ Native Myanmar Forum က ကို SoMeOnEnUlL ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အချစ်ထောင်..သံယောစဉ် ကြိုးနဲ့တည်းနှောင်ထားတဲ့ အကျဉ်းဆောင်ကိုယ်ဘယ်လို လုပ်ပြီး.. ရုန်းမှာလဲ မင်းပြောပါကိုယ်ပိုင်တဲ့ လွတ်လပ်မှု့ တွေ စွန့် လွှတ်.... ထားလိုက်ပြီအချစ်ထောင်..လူ့ လောက အကြီးမားဆုံး အရာဝတ္တု .. နှိုင်းမရအောင်အပါယ်ဘုံဖြစ်လိုက်.. နတ်ပြည်ဖြစ်လိုက် .. ရူးချင့်စရာမဆိုင်လှတဲ့ ဦးနှောက် အတွေးအခေါ်များလည်း .. အပ်လိုက်ပြီကိုယ့်ကို ထာဝရ ချုပ်နှောင်.. မင်းအကျဉ်းထောင်နေပူပစေ မိုးကျပစေရတယ် .. မှောင်နေပစေ လင်းလွန်းပစေရမယ်ရယ်ပစေ ငိုပစေ ပြုံးပစေ မဲ့ပစေ.. ဘာဖြစ်ဖြစ်ရနေပါတယ်.. အစဉ်အမြဲလည်း ရပါစေမယ်အချစ်... အကျယ်ချုပ်လား .. အချစ်.. တကယ်လုပ်မလား .. အချစ်ကြေအက်နှလုံးသား စံပြအကျဉ်းသားချစ်တာ .. ရင်ထဲက တငွေ့ ငွေ့ နဲ့ ခံစားချက် မေတ္တာ .. အကုန်ပေါ်အောင် ထုတ်ပြီး မပြနိုင်စွမ်းလို့ပေါက်ကွဲမတတ် ကြင်နာ တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းလောက် ပေးသနား ရမယ်နော် အချစ်မှာ ဘယ် ဥပဒေ .. ပုဒ်မ နဲ့ လာဖမ်းလို့မဖြစ်ပါဒါပေမယ် မင်းအတွက်တော့ လိုအပ်အမျှ ဖြစ်ရမယ်စကားနာတွေ ထိုးခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘူးကွယ့် မင်းနားထောင်ကိုယ့်ကို ထာဝရ ချုပ်နှောင်... မင်းအကျဉ်းထောင်အပြင်မှာလေ .. တစ်စက္ကန့် အချိန်တိုင်းဟာရင်မှာလေ .. ခဏနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလောက်ထင်ပိုရင် .. တို တကိုယ်ဆွေးရင် .. ဆန့် သကိုလိုအပ်သမျှရှိနေပါတယ်.. ထာဝရအထိရှိပါစေမယ့် .. အချစ်အမြန်စီးလား .. အချစ် .. ပြန်နှေးမလား .. အချစ်ခုန်တဲ့ နှလုံးသား စံပြအကျဉ်းသားနေပူပစေ မိုးကျပစေရတယ် .. မှောင်နေပစေ လင်းလွန်းပစေရမယ်ရီပစေ ငိုပစေ ပြုံးပစေ မဲ့ပစေ .. ဘာဖြစ်ဖြစ်ရနေပါတယ် အစဉ်အမြဲလည်း ရပါစေမယ်အချစ်... အကျယ်ချုပ်လား .. အချစ် .. တကယ်လုပ်မလား .. အချစ်ကြေအက်နှလုံးသား စံပြအကျဉ်းသား
8/19/2006 09:44:00 AM
ဒီနေ့ကျွန်မရဲ့ အစ်မ တစ်ယောက်လို ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်မွေးနေ့ ပါ။ မနေ့ က သူု့ မွေးနေ့ ထင်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်း သွားပြောမိတယ်။ ဟီး ဟီး။ မှတ်ထားတာ နေ့မှားပြီး မှတ်မိ ရက်သား ဖြစ်နေတာ။ တော်သေးတယ်၊ သူ့ မွေးနေ့ ကို မမှတ်မိရကောင်းလားဆိုပြီး စိတ်မဆိုးလို့ ။သူ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းရင် အဲ့ဒီက သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရသွာတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေ။ သြော် မွေးနေ့ ရှင်ကို ... မ.. လို ခေါ်နေလို့ကျွန်မထက် အသက်မရမ်းကြီးတဲ့ အစ်မကြီး တစ်ယောက်လို့မထင်လိုက်ကျပါနဲ့ ။ ကျွန်မ နဲ့လပိုင်းလေးပဲ ကွာတာပါ။ ကျွန်မထက်လည်း နုပျိုချောမောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ကျွန်မ့ဆိုးအမျှ ကျွန်မအပေါ် နာလည်မှု့အပြည့် နဲ့ခွင့်လွတ်တတ်၊ ကျွန်မကို ညီမ တစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး ဂရုတစိုက်လည်းရှိ၊ ကျွန်မကလည်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လိုရော၊ အစ်မတစ်ယောက်လိုပါ ခင်တွယ်တဲ့ အတွက် .. မ.. လို့ခေါ်တာပါ။မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းဆို လက်ချိုးရည်ရင်တောင် လက် ၁၀ချောင်း ပြည့်အောင်မရှိတဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ တကယ့် ရှားရှားပါးပါး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပါ။ မှတ်မိပါသေးတယ် ။ နောက်တစ်နေ့ဆို ကျွန်မ ဘွဲ့ တစ်ခုယူဖို့အတွက် နောက်ဆုံးတင်ရတဲ့ စာတမ်းက တင်ရတော့မယ်။ ဘယ်အရာမဆို အချိန်ကပ်မှ လုပ်တတ်တဲ့ ကျွန်မကလည်း ထုံစံ အတိုင်း တစ်ချို့ ဟာတွေက အဆင်သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ တစ်ချို့ ရေးဖို့လိုတာတွေကို ဒီနေ့မွေးနေ့ ရှင် ကရေးပေးတယ်။ နောက် သူလို့ ပဲ ကျွန်မက အစ်မတစ်ယောက်လို ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က လိုတာတွေ စစ်ပေးတယ်။ စာအုပ်ပုံစံ တင်ရမှာဆိုတော့ လိုတာတွေ၊ ပါရမှာတွေကို မေ့ကျန်ခဲ့မှာ စိုးလို့စစ်ပေးတာ။အရမ်းလည်း ရယ်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့အားလုံး IT သမားတွေ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်မ အဲ့ဒီတုန်းက စာတမ်း အတွက် လုပ်တဲ့ အကြောင်းအရာက သူတို့ တွေ မသိကြပါဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တောင် စာတမ်း တင်ပြီးမှ ရေးရေးလေး သဘောပေါက်သလို ရှိတဲ့ အကြောင်း အရာတစ်ခုပါ။ သူတို့ က မေးတယ်။ ကျွန်မရေးနေတာ ဘာကြောင်းလဲ တဲ့။ ဟီး ဟီး။ ကျွန်မလည်း တတ်သလောက်ရှင်းပြပေမယ့် သူတို့ကြည့်ရတာ နားလယ်တဲ့ ပုံ မပေါ်ပါဘူး။ သူတို့ မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲ့ဒီတုန်းက ကျွန်မနဲ့ကျောင်းတူတူတက်နေတဲ့ သူတွေလည်း ကျွန်မရဲ့ စာတမ်း နာမည်ကြားရင် ဘာကြီးလဲ၊ နားမလည်ဘူး၊ ရှင်းပြပါလား၊ အဲ့လိုတွေ အမြဲမေးခံထိ ခဲ့တာပါ။ ဒါတွေထားပါ။ ကျွန်မ အခု အဓိကပြောချင်တာက ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကြားက ရအောင် ရေးပေး၊ ကူညီပေးခဲ့ ကြတာတွေကို ကျွန်မဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျေးဇူး အရမ်းတင် ပါတယ်။သူတို့ မှ မဟုတ်ဘူး တစ်ခြား သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကလည်း ကျွန်မ လိုသမျှ၊ သူတို့ လုပ်ပေးနိုင်တာတွေ မှန်သမျှ အားလုံးကို ဘယ်တော့မဆို မငြီမငြူလုပ်ပေးခဲ့ ကြတာပါ။ ဒီမှာ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြုံလာတိုင်း အဲ့ဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တူတူနေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေကို အရမ်းသတိရမိတယ်။ နောင်ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ သူငယ်ချင်း အားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံချင်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့ တော့ ဒီလောက်ပဲ၊ တော်ပြီ။ နောက်မှပဲ အချိန်ရရင် ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းတွေ ရေးတော့မယ်။
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ အစစ အရာရာ အားလုံး အဆင်ပြေပြီးမ.. လိုချင်တဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မိသားစု ဘဝလေး ကို မြန်မြန်ရပါစေ။မ ရေ.. ဒီနေ့ တော့ မွေးနေ့အမှန်နော်။ နောက်ဆို လုံးဝ မမှားတော့ပါဘူး။ မှတ်မိသွားပြီ။
8/18/2006 04:07:00 PM
The farthest planet from the Earth, Pluto, is under attack from astronomers and may be demoted asaplanet. 3,000 astronomers and scientists from around the world will meet in Prague this week to discuss this very topic. They need to decide if Pluto, which was discovered in 1930, is actuallyaplanet by definition. "The pivotal question is the status of Pluto, which is clearly very different from Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune," Owen Gingerich, professor of Astronomy and History of Science emeritusathe Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics told Reuters. Suchachange would cause quiteastir as millions of text books would be outdated and the curriculum for teaching the solar system would have to be drastically changed.Source : RevolutionPortalAbout Pluto : Wiki , NinePlanets
8/15/2006 01:38:00 PM
Good Morning Everybody!! တစ်ပတ်ပြီး တစ်ပတ် အချိန်တွေက အကုန်မြန်လိုက်တာနော်။ ဒီနေ့မနက် အလုပ်ကို လာရင်းစဉ်းစားမိတယ်။ ခုတစ်လော အချိန်တွေသာ ကုန်သွားတယ်၊ ဘာများ အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ဖြစ်သလဲလို့ ။ အလုပ်သွားတယ်၊ လကုန်တော့ လခ ရတယ်ဆိုတာ ကို ထဲ့ စဉ်းစားဖို့မလိုဘူး ထင်တယ်။ ဒါ လူတိုင်း နေ့ စဉ် မလုပ် မနေရ လုပ်နေရတဲ့ အရာတစ်ခုပဲ။ အဲ့ဒါကလွဲလို့တစ်ခြားဟာရော၊ ပညာရေး၊ လူမှု့ ရေး ၊ အလုပ် ၊ စီးပွားရေး နဲ့ပတ်သက်လို့ တိုးတက်မှု့ လို့ပြစရာရှိအောင် ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်သလဲ။ သေချာစဉ်းစား ကြည့်တယ်။ ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်လာတယ်။ ဒီလိုပဲ အချိန်တွေ အကုန်ခံသွားတော့ မှာလား။ ကိုယ်က သာ ဒီအတိုင်းရှိနေမယ်။ အချိန်တွေကုန်ပြီး အသက်တွေ ကြီးလာတာပဲ ရှိမယ်။ တစ်ခြားတော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခု ခုတော့ လုပ်ဦးမှ။ ဒီအတို်င်းဆက်သွား နေလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ တကယ်ဆို လုပ်လို့ရတာတွေ အများကြီးပဲ။ တစ်ခု ခု မလုပ်ခင်တော့ ဘယ်အရာက ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတယ်၊ ကိုယ်ဘာကို လိုအပ်တယ်၊ဘယ်လို လုပ်လို့ ရတယ် ဆိုတာတွေကို သေချာ စဉ်းစားဖို့အရင် လိုမယ်။ ကဲ ကိုယ်ကိုကိုယ် မမေ့အောင်၊ သတိပေးတယ့် အနေနဲ့ တော့ မှတ်ထားလိုက်ပြီး။ တစ်ကယ် လုပ်ဖြစ် မဖြစ်ကတော့ စောင့်ကြည့် ရမှာပဲ။ ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်မလဲ။
ဒီနေ့ ဖန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ပေါင်ချိန်စက် တစ်လုံးဝယ်ဖြစ်တယ်။ ဖန်နဲ့လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ ကြည်ကြည်လေး။ လှတယ်။ ဒါက ဒီနေ့ ဝယ်လာတဲ့ ပေါင်ချိန်စက်လေး။ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ပေါင်ချိ်န်ကြည့်တယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံး ကျွန်မရဲ့ ပေါင်ချိန်စက်လေးမှာ လာစမ်းချိန်ကြည့်ကြတယ်။ လူတိုင်းဝ လာတယ်၊ ကျွန်မက လွဲရင်ပေါ့။ ကျွန်မကတော့ အရင်ကထက် နည်းနည်းပိုပိန် သွားတယ်။ ဘယ်လောက် ရှိလည်းတော့ မပြောတော့ဘူး။ ဟီး ဟီး။ ပိန်သွားတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ဒီလောက်ပဲရှိမယ် မထင်ဘူး။ စိတ်ကို လေ သွားတာပဲ။ ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူကို ကျွန်မခု ဘယ်လောက် ပေါင်ချိန်ရှိနေလည်း မပြောရဲတော့ဘူး။ သူသိရင် ဒီလောက်တောင် ပိန်နေရလားဆိုပြီး ဆူမှာ။ ဆူတာ သူ့ အလွန် မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ကျွန်မကို အစာမှန်မှန် စားဖို့အမြဲပြောတယ်။ နေ့ လယ်စာ စားချိန် ဖုန်းဆက်ရင်လည်း အစာကုန်အောင်စားဖို့အမြဲ သတိပေး၊ မနက်ဆိုလည်း နွားနို့ သောက်၊ ညဆို မိုင်လို သောက်လို့မှာတဲ့ ကြားက ကျွန်မကလည်း ကျွန်မပါပဲ။ ဝလာတယ်ကိုမရှိ၊ ပိန်မြဲ ပိန်လျှက်ပါပဲ။အရင် က နွားနို့ နဲ့မိုင်လို သောက်လို့ မရဘူး။ သောက်တာနဲ့ အမ် ချင်တယ်။ ခုတော့ မနက်နဲ့ညတွေမှာ ချစ်သူက ဖုန်းဆက်၊ အတင်းသောက်ခိုင်းလို့ ၊ နှာခေါင်းပိတ် သောက်ရင်နဲ့ တော့ အဲ့ဒါတွေသောက်လို့ဝင်လာပြီ။ တိုးတက်လာတဲ့ သဘောလို့ပြောရမယ်။ ဒါတောင်ခုတလော သူကမပြောလို့မသောက်ဖြစ်ပြန်ဘူး။ သူ့ ခဗျာလည်း အမြဲလိုက်ပြော နေရတာ ပင်ပန်းသွားပြီနဲ့ တူပါရဲ့။ဒီနေ့ ပေါင်ချိန်စက်လေး သွားဝယ်တာကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဝလာမလာ သိချင်လို့ ပါ။ နည်းနည်း ဝလာရင် ပိုပြီး အားတက်သရောနဲ့အစာတွေ မှန်မှန်စား၊ အိပ်ရေး ဝအောင်အိပ် လုပ်ဖြစ်မလားလို့ ။ ဘာပဲ ပြောပြော စမ်းကြည့်တာပေါ့။ ဒီနေ့ပေါင်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ ပိန်နေတာ သိလိုက်ရလို့ညစာလည်း စားလိုက်တယ်၊ အိပ်ခါနီး မိုင်လိုသောက်ပြီး စောစောအိပ်မယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ပါ၊ ဝအောင်လုပ်ပါ၊ ဒီလောက်ပိန်နေတာ မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာဘူးလို့ အမြဲ ပြောနေတဲ့ မိဘတွေနဲ့ချစ်သူ စိတ်ချမ်းသာအောင် ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။ တစ်ခုပြောရဦးမယ်၊ ကျွန်မကို ကီလို ၄၀ ပြည့်တဲ့နေ့လုပ်ချင်တဲ့ အရုပ်တွေ ဝယ်ပို့ ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ မောင်ငယ်တစ်ယောက်၊ လိုချင်တာ ဝယ်ပေးမယ်၊ စားချင်တာ လိုက်ကျွေးမယ် ပြောတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်။ ၄၅ ကီလို ရှိရင် ကြိုက်တာ အကုန်ဝယ်ပေးမယ် ပြောထားတဲ့ မောင်ငယ်ကတစ်ယောက် ရှိတယ်။ သူတို့ ပြောတာ ကြာလှ ရှိပြီပေါ့၊ ကျွန်မကတော့ ခုချိန်ထိ သူတို့ ကို တစ်စုံတစ်ရာ ဝယ်ခိုင်းခွင့် တစ်ခါမှ မရဘူးသေးပါဘူး။
8/13/2006 08:21:00 PM
စိတ်ထဲ ရှိတိုင်း ဖွင့်ပြောတာ မကောင်ဘူးထင်တဲ့ အတွက် စိတ်ထဲရှိ နေတဲ့ တစ်ချို့ သောအရာတွေကို မြင်နိုင်သူတွေသာ မြင်ရအောင် သိမ်းဆည်းထား လိုက်တော့ မယ်။13 August 2006 - 09:50 AM
8/13/2006 09:59:00 AM
8/10/2006 04:24:00 PM
ဒီနေ့အလုပ်မှာ အလုပ် လုပ်ရင်း ထုံးစံ အတိုင်း အချိန် နည်းနည်းရတာ နဲ့google video မှာ Myanmar ဆိုပြီး ရှာရင် ဘာတွေများ ထွက်လာမလည်း သိချင်တာနဲ့ရှာကြည့်လိုက် တော့ မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ video တော်တော်များများ တွေရတယ်။ ဒါနဲ့ဟိုဟာဖွင့်ကြည့် ဒီဟာဖွင့်ကြည့် နဲ့စပ်စုနေတာ နောက်တော့ ဒီက TP poly က 2005 Thingyan ပွဲမှာ ရိုက်ထားတဲ့ TP Myanmar Play 1 ဆိုတဲ့ video လေးကို တွေလို့ကြည့်လိုက်တာ သဘောကျ သွားတာနဲ့လိုက်ရှာကြည့်တော့ video အပိုင်းလေးတွေ တော်တော်များများ တွေ့ ရတယ်။ အလုပ်မှာ ပဲ အားလုံးပြီအောင် ကြည့်လိုက်တယ်။ အဲ့လောက်တောင် အလုပ်ကို အရမ်းကြိုးစား တာပါ။ TP Thingyan 2005 အခွေကို ဒီက လူတော်တော်များများကတော့ ကြည့်ပြီးကြမယ် ထင်တာပဲ။ ဒီမှာ Poly တွေမှာ Thingyan ပွဲတွေ လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိကြတယ်။ ကျွန်မ ဒီရောက်ခါစကတော့ TP Thingyan 2004 ကို ကျွန်မရဲ့ မောင်ဝမ်းကွဲ နဲ့သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတင်းဖိတ်တာနဲ့ သွားဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီနေ့ က နေ့ တစ်ဝက်အလုပ် လုပ်ရတော့ အလုပ်ကနေ တန်းသွားရတာ။ ဟိုရောက်တော့ လူတွေက အများကြီးပဲ။ အဲ့လောက် လူများမယ် ထင်မထားဘူး။ ကျွန်မက လူတွေ အရမ်းများရင် မနေတတ်တော့ဘူး။ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့ သူ သိပ်မရှိတာလည် ပါမယ်ထင်တယ်။ သူတို့ တွေက တော့ ပြဇာတ်ကောင်းတယ်၊ အကုန်ပြီးအောင် ကြည့်ပါ၊ ပြီးရင် ရေလည်းပတ်ကြဦးမှာ၊ မုန့် တွေလည်းကျွေးမယ်၊ ပြီးရင် အိမ်လိုက် ပို့ ပေးမယ် ဘယ်လောက်ပဲ ပြောပြော အလုပ်က လာရတာ ပင်ပန်းနေတယ်လို့ရောချလိုက်ပြီး၊ သူတို့ ကျေနပ်အောင် နာရီဝက်လောက်ပဲ နေပြီး ပြန်လာလိုက်တယ်။ သူတို့က TP Thingyan ကို အခွေထုတ်မှာ လို့ လည်း ကြိုပြောထားတာလည်းပါ ပါတယ်။ ရေပတ်ခံရ မှာလည်း မကြိုက်ဘူး၊ လူများတဲ့ ပွဲတွေလည်း မသွားချင်တော့၊ နောက်ပိုင်း ဘယ် Thingyan ပွဲမှ မသွားတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ 2005 Thingyan ပွဲတွေတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ဖိတ်သေးတယ်။ မလာနိုင်ဘူးပြောရင် စိတ်ဆိုးကြမှာ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်မ ရန်ကုန်ပြန်တဲ့ နေ့ နဲ့တိုက်နေလို့ထွေထွေထူးထူး အကြောင်ရှာ ငြင်းနေစရာ မလိုတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ နင်မလာဖြစ်လည်း အခွေ ထွက်ရင် လာပေးမယ် ပြောလိုက်ကြတာ ဘယ်လောက်တောင်များ သတိတရ ရှိလိုက်ကြလည်းဆိုတော့ ဒီနေ့ မှပဲ google ရဲ့ ကျေးဇူးနဲ့TP Thingyan 2005 ကို ကြည့်ရပါတော့တယ်။ မကြည့်ရ သေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြည့်ချင်ရင် ကြည့်လို့ ရအောင် ကျွန်မ ဒီနေ့ကြည့်ဖြစ်တဲ့ google video က TP Thingyan 2005 လင့်ခ်တွေကို ဒီမှာ ထပ်ဆင့်မျှဝေ လိုက်တာပါ။ ဒီ video တွေကို ပိုစ့်လုပ်ပေးထားသူ တွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Google Video - TP MYANMAR Thingyan 2005 YouTube မှာ ရှာရင်လည်း ဒီက Poly တွေရဲ့ Thingyan အခွေတွေ တွေနိုင်မယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မတော့ ခုဟာက အလုပ်မှာ ဆိုတော့ Google Video လောက်နဲ့ ပဲ ကျေနပ်လိုက်တော့မယ်။ YouTube ကဟာတွေ တော့ အိမ်ရောက်မှ ကြည့်တော့မယ်။YouTube - Thingyan
Singapore National Dayဒီနေ့ဒီနိုင်ငံ ရဲ့ အနှစ် ၄၁ ပြည့် မွေးနေ့ တဲ့။ အပြင်မှာ အရမ်းစည်းကား နေတယ် ပြောကြတာပဲ။ ဘာတွေ နဲ့စည်ကားနေလဲ တော့ ငါမသိဘူး။ သိလည်း မသိချင်ဘူး။ ခု ငါတစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ရှိနေတယ်။ အစ်ကိုတော့ အပြင်ထွက် သွားတယ်။ အိမ်က တူတူနေတဲ့ လူတွေအားလုံး အပြင်သွားနေကြတယ်။ ငါကို အပြင်မထွက်ဘူးလားတဲ့။ အပြင်ထွက်ဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လူတွေ အများကြီးနဲ့တိုးဝှေ့ ပြီး သွားလာရမယ် နေရာတွေ ဆို အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စ၊ မသွားမဖြစ် ကိစ္စတွေ ကလွဲရင် ဘယ်နေရာမှ မသွားချင်ဘူး။ အိမ်မှာ အိပ်နေတာကမှ၊ အိပ်ရေးဝပြီး အနားရသေးတယ်။ ဒီနေ့ ပြီးရင် နောက်လ အတွင်း အားလပ်ရက် တစ်ရက်မှ မရှိတော့ဘူး။ စက်တင်ဘာလ ကုန်ခါနီးမှ အားလပ်ရက် ရတော့မှာ။ ရှားရှားပါးပါး ရတဲ့ ဒီ အားလပ်ရက်လေးမှာ အပြင်မထွက်ချင်ပါဘူး။ အင်တာနက် က သတင်းတွေလိုက်ဖတ်၊ စာအုပ်တွေဖတ် လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဘလောခ့်တစ်ချို့ လိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဘလောခ့်တွေ တောင် အရင်ကလောက် မဖတ်ဖြစ်တာကြာပြီ။ ဖတ်စရာ အကြွေးတွေက အများကြီးပဲ။Happy Birthday Py Pyဒီနေ့ပိုင်ပိုင် ရဲ့ မွေးနေ့ ။ ဖုန်းဆက်ပြီး မွေးနေ့ဆုတောင်းလုပ်ရင် ကောင်မလား စဉ်းစားမိသေးတယ်။ မလုပ်တော့ဘူး။ အီးကတ်တော့ ပို့ လိုက်တယ်။ ပိုက်ဆံ မရှိတာနဲ့ဒီနှစ်တော့ ဘာမှ မွေးနေ့လက်ဆောင်မပေးဖြစ်လိုက်ဘူး။ အိမ်ပြောင်းသွားပြီပြောတယ်။ အိမ်လိပ်စာ အသစ် လည်း မသိဘူး။ မေးလည်း မမေးမိဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ဘာမှ မပို့ဖြစ်လိုက်တော့ဘူး။ နောက်နှစ်မှပဲ မွေးနေ့လက်ဆောင်ပို့ တော့မယ်။ မွေးနေ့လေး ဆုတောင်းပေးလိုက်ဦးမယ်။ပိုင်ပိုင်ဒီနေ့ပိုင်ပိုင်ရဲ့ ၂ရ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မှသည်.. နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် လိုအင်ဆန္ဒ အားလုံးပြည့်စုံပါစေ။ အရင်က ထက် ဂိမ်းများများ ပိုဆော့နိုင်ပါစေ။ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှာနိုင်ပြီး နေနေ့ ကို မုန်းဖိုးများများပေးနိုင်ပါစေ။ အမွေများများ ပေးနိုင်ပါစေ။ဒီပိုစ့် ကို မတော်တဆ ပိုင်ပိုင် ဖတ်ဖြစ်ခဲ့လို့သူ့ အသက်ကြီထဲ့ ရေးထားတာ တွေ့ ရင် စိတ်များဆိုးနေမလားပဲ။ ဟား ဟား။
8/10/2006 10:10:00 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ.. ချစ်သူ။ယနေ့မှစ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် စိတ် ချမ်းသာ၊ ကိုယ် ကျန်းမာစွာ ဖြင့်ဖြစ်ချင်တာ၊ဖြစ်သင့်တာ နဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ တထပ်တည်းကြပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းသော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ချစ်ခြင်းများစွာဖြင့်နေနေ
တစ်ကယ်ပါ အလုပ်က မောမောပန်းပန်းနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆို ပွစိ ပွစိ နဲ့နားငြီး မယ့်ဟာတွေ နားမထောင်ချင်ဘူး။ ပင်ပင်ပန်းပန်းလည်း ဘာမှ မလုပ်ချင်ဘူး။ အရင်က ကြားဘူးတာတွေ၊ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဘူးတာတွေ အရ အိမ်ထောင် တစ်ခုမှာ ယောက်ျားက အလုပ်က မောမောပန်းပန်းနဲ့ပြန်လာ၊ အိမ်မှာ မိန်းမက ပွစိပွစိ လုပ်တော့ ရန်တွေဖြစ်ကြရော ဆိုတာတွေကို .. ခံစားလို့မရခဲ့ဘူး။ ခုမှပဲ နည်းနည်း ကိုယ်ချင်းစာ မိတော့တယ်။ အရင်က တစ်ယောက်တည်း နေတော့၊ အလုပ်က အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆို အနားယူ၊ သီချင်းနားထောင်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ အိပ်ချင်ရင်လည်း တန်းအိပ်လိုက်၊ စိတ်အေးလက်အေး ကိုယ်နေချင် သလိုနေ ပြောမယ့်သူ ဆိုမယ့်သူမရှိ၊ မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို ထပြီး လုပ်နေစရာလည်း မလို၊ ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်လဲ။ ခုကြ တော့ အစ်ကို ဖြစ်တဲ့ သူက ရောက်နေတယ်။ တစ်ခုခုဆို ကိုယ်လုပ်တာ ကိုင်တာတွေ သူ့ စိတ်နဲ့မတွေ့ ရင် အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အဆူက ခံရပြီ။ အစ်ကိုက ကောင်းစေချင်းလို ပြောနေတာတွေ ဆိုတာသိပေမယ့် ကိုယ်က နားမှ မထောင်ချင်တာ။ မောလည်းမောနေတော့ စကားကို လေ လုံးကွဲအောင် ပြန်မပြောချင်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အစ်ကိုက စိတ်တွေဆိုးလာပြီး ပိုပြီးဆူရော။ ပိုပြီးဆူတော့ ကိုယ်က ပိုပြီး နားမထောင်ချင်ဖြစ်လာတယ်။ ဒါတောင် သူက အစ်ကို မို့ လို့ ပြန်မပြောရဲလို့သာ ငြိမ်နေရတာ။ သူကလည်း ညီမလေး ဆိုပြီ ကိုယ့်ရဲ့ မလှုပ်တလှုပ်ပုံစံကို သည်းငြီးခံနေလို့ ။ ကိုယ်က ပြန်ပြော၊ သူက သည်းငြီးမခံနဲ့ ဆို ရန်ပွဲတွေ ဆက်နေမှာ ကြာလှပေါ့။ဒါကြောင့်လည်း ဖေဖေနဲ့မေမေက သမီးရဲ့ အကျင့်တွေနဲ့ဆို ယောက်ျားယူလို့ ကတော့ တော်ရုံ ကောင်လေးမျိုးနဲ့ဖြစ်မှ မဟုတ်ဘူး၊ အဲ့ဒီတော့ အပျိုကြီပဲလုပ်တော့ လို့အမြဲပြောနေတာဖြစ်မယ်။ ကြာလေ တစ်ယောက်တည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလည်းဆိုတာ ပိုသိလေ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေနဲ့ ဆို တစ်ယောက်တည်းနေတာ ပိုအဆင်ပြေလောက်တယ် ဆိုတာ ပိုသိလေ။ အင်း ဒီအတိုင်းဆို ကြာရင် ငါလည်း အပျိုကြီးပဲ ဖြစ်တော့မလား မသိပါဘူး။
8/07/2006 09:50:00 PM
အလုပ် လုပ်ရတာ စိတ်မဖြောင့်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ခု သူ ဗိုက်အောင့်နေ ပြန်ပြီလေ။ ဘာလို့ခဏ ခဏ ဗိုက့်အောင့်နေရတာလဲ။ အစာ များများစားတာနဲ့ ဖြစ်ရောပဲ။ တော်တော့်ကို ပေတိ ပေကပ်နဲ့လုပ်ချင်တာလုပ်၊ စာချင်တာ စားတယ်။ ဒီနေ့ဗိုက်အောင့်နိုင်တယ် စိတ်ထဲ ထင်နေလို့မနေ့ ညက ကိုယ်မအိပ်ခင် သူ့ စီ ဖုန်းခေါ်ဖို့ကြိုစားသေးတယ်။ အစာ စားတာ ဂရုတစိုက်စားဖို့ ၊ အစာကျေလွယ်တာတွေပဲစားဖို့မှာမလို့့ဟာကို ဖုန်းကဆက်လို့မရ။ မနက် မိုးလင်း၊ အလုပ်သွားခါနီး ဖုန်းထပ်ဆက်တော့ မှပဲ ရတော့တယ်။ ဖုန်းဆက်လို့ရတဲ့ အချိန်ကြတော့ ညစာက စားပြီးနေလို့အိမ်တောင်ပြန်တော့မယ်။ ခု အိမ်ပြန် ရောက်တော့ ဗိုက်ကအောင့်ပြီ။ ခက်တယ်။ကိုယ်က အနီးအနားမှာ ဆိုလည်း အစား၊ အသောက်ကိစ္စကို ကိုယ်တတ်နိုင် သလောက် ဂရုတစိုက် လိုက်လုပ်ပေးလို့ရသေးတယ်။ ခုဟာက အဝေးကြီး။ ဘာလုပ် ပေးရ မှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ခုရော အိပ်လို့ ပျော်ရဲ့ လား မသိဘူး။ ဖုန်းဆက်လို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ အိပ်ပျော်နေရင် နိုးသွားမှာ စိုးရသေးတယ်။သူ့ မှာ ကျန်တာတွေ ဘာမှ စိတ်ပူစရာ၊ စိုးရိမ်စရာ မရှိဘူး။ ဒီ အစားအသောက် ကိစ္စတစ်ခုပဲ စိုးရိမ်နေရတယ်။ အစာအ်ိမ်ကလည်း ကောင်းတာ မဟုတ်။ အစားမျုားများ စားရင်ဗိုက်က အောင့်ပြီ။ ဟင်း... ဒီလို ဗိုက်အောင့်နေပြီဆို သူလည်း ခံရတာ မသက်မသာ၊ ကိုယ်လည်း စိတ်ပူပြီ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး။ နောက်ဆို အစားအသောက် ဂရုစိုက်ဖို့အမြဲသတိပေးနေမှ ဖြစ်တော့မယ်။ မနက်ကြရင်လည်း အလုပ် သွားရအုံးမယ်။ ခုတော့ သူ ဗိုက်အောင့် သက်သာပြီး အ်ိပ်သွားပါစေလို့ ပဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပဲ။ ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်ပေးလို့မှမရတာ။
8/07/2006 02:31:00 PM
ဥဒစ္စအလွန် သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်တယ် ပြောသူတစ်ယောက်အတွက် ကြိုးစား ရေးသားထားခြင်းပါ။ အောက်ကစာသားတွေဟာ သီချင်းကို နားထောင်ကြည့်ပြီး၊ ကြားမိသမျှကြိုးစား ရေးထားခြင်းဖြစ်လို့စာသားတွေမှာ မှားယွင်းမှု့တွေ ရှိနိုင် ပါတယ်။ ကျွန်မ ဒီ ဥဒစ္စအလွန် သီချင်းကို ကိုအောင်လံမောင်ရဲ့ ဇူလိုင်လ အတွက် သီချင်းများ ဆိုတဲ့ ပိုစ့်မှ ရရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းပေါင်းများစွာကို အမှတ်တရ ပြန်လည်နားထောင်ဖြစ်အောင် မျှဝေခဲ့ တဲ့ အစ်ကိုကြီး ကိုအော်လံမောင် ကို အရမ်းကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ဒီလင်ခ့်က http://awlanmg.blogspot.com/ ကိုအော်လံမောင်ရဲ့ ဘလောခ့်ပါ။ ကျွန်မ အမြဲသွားရောက် ဖတ်ရှု့လေ့ ရှိတဲ့ သလောခ့်တစ်ခုပါ။ အဲ့ဒီ ဘလောခ့်မှာ ဖတ်စရာ၊ မှတ်စရာ အကြောင်အရာပေါင်းများစွာ၊ နားထောင်ချင်စရာ သီချင်းပေါင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဥဒစ္စအလွန် - စိုင်းထီးဆိုင်ရင်ထဲက နှင်းများကျတဲ့ ဒီဟေမာန် နံနက်ခင်းမှာချယ်ရီပန်းများလည်း ဖူးပွင့်ဝေပြီအမှောင်ကွယ်ကာ တိမ်တွေကြားကပြူထွက်မယ့် ရှင်နေမင်းလို မျှော်ကိုးဆဲ ချစ်သူရယ် မလာတော့ တုန်ချမ်းလို့ခိုက်ခိုက်အေးနေ အပြင်ဘက်က တိုက်တဲ့ မြောက်လေဝတ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အနွေးထည် ... မကာနိုင်ရှာဒါပေမယ့် သေချာလည်းလေ ကြင်နာသူ ပေါ်မယ့်လမ်းမှာမျက်လုံးက မှိတ်လည်း စိတ်နဲ့ မြင်နေမယ်ဥဒစ္စအလွန် ကမ်းကုန်နေပြီ ချစ်လုံ့ လ ချစ်ဝိရိယများ ရင်ထဲက မီးပြင်းတိုက်သလိုဒီဂိန်မာန် နေမွန်းတည့်နွေဥသြကလေးလည်း လွမ်းတေးသီပြီချောင်ငယ်မှာ ထိုင်ကာတွေးမိလိုချိန်မှာ မသာတဲ့လလိုမျှော်လင့်ဆဲ ညချိန်ရယ်လာတော့ ကျိမ်စာတွေ ပြုကာထားသလားဝေဟင်က ကျတဲ့မျှား ပမာကိုယ်ဆောင်းတဲ့ ထီးကပျော့တယ် မခံနိုင်ရှာဒါပေမယ့် သေချာလည်းလေ ကြင်နာသူ ပေါ်မယ့်လမ်းမှာမျက်လုံးက မှိတ်လည်း စိတ်နဲ့ မြင်နေမယ်ဥဒစ္စအလွန် ကမ်းကုန်နေပြီ ချစ်သောက ချစ်စိတ်တဇများရင်ထဲကကျတဲ့ မျက်ရည် ဒီဝတ်သာန် အခါညချမ်းမှာကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အဖော်လွဲ ထီးတည်းကျန်နေလှောင်ရယ်ကာ နေနိုင်ရက်သူ ရွာလေပြီ လျှပ်ပြက်မိုးခြိန်းမျက်လုံးနဲ့ နား ခံနိုင်ရည်ဝမုန်တိုင်းများ ပုန်းတဲ့ ငုတ်ကောင်မျှော်လင့်ချက် ဆက်ရွေ့ထားကာမာနလည်း မထားပြီ၊ မရှိပြီ ယုံပါတော့ ဆိုချင်တယ် သေချာလည်းလေကြင်နာသူ ပေါ်မယ့်လမ်းမှာမျက်လုံးက မှိတ်လည်း စိတ်နဲ့ မြင်နေမယ်ဥဒစ္စအလွန် ကမ်းကုန်နေပြီ ချစ်အတိတ်ကောင်း ချစ်နိမိတ်ကောင်းများ
8/05/2006 11:16:00 PM
ဒီနေ့ကျွန်မကို THKZ က Microsoft ကနေပြီးတော့ Window Live Spaces ဆိုတာကို စသုံးလို့ ရပြီ ဆိုပြီ သတင်းပေးပါတယ်။ အသစ်ဆို တော့ ဘယ်လိုဟာလည်းလို့သိချင်၊ စမ်းချင် သွားတယ်။MSN Spaces မှာ ကျွန်မရဲ့ hotmail နဲ့လုပ်ထားတဲ့ site တစ်ခုရှိပါတယ်။ http://spaces.msn.com/naynaynaing ဆိုတဲ့ site ပါ။ Window Live Spaces ဆိုလို့MSN Spaces နဲ့ဘာကွာ လည်း သိချင်လို့http://spaces.live.com/ မှာ account သွား လုပ်တာ၊ hotmail နဲ့password ထည့်လိုက်တော့ ကျွန်မ ဘာမှ မလုပ်ရပဲ account က ရှိနေတယ်။ တော်တော် အံ့သြသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းလို့ ၊ သေချာကြည့် မှ သိတော့ တယ်။ အဲ့ဒီက data တွေက ကျွန်မရဲ့ MSN Spaces က data တွေပဲ။ Window Live Spaces ဆိုတာ MSN Spaces ပဲလို့အဲ့ဒီမှ သိတော့တယ်။MSN Spaces မှာ account မရှိသေးတဲ့ သူတွေမှသာ Window Live Spaces မှာ new account လုပ်ဖို့ လိုတာပါ။ ကျွန်မတို့ လို MSN Spaces မှာ account ရှိပြီးသာလူတွေကြတော့ ဘာမှ ထပ်လုပ်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ Micorsoft က MSN spaces ကနေ Window Live Spaces လို့နာမည်ပြောင်းပြီး Feature အသစ်တွေ ထပ်ထည့်ပေးထားတာပဲလေ။ တူတူပဲပေါ့။ ကျွန်မကို ကလည်း တော်တော်ကို တုန်းပါတယ်၊ တုန်းရုံ မက စာဖတ်တာ လည်းပျင်းတော့ MSN Live Spaces အကြောင်းကို သေချာဖတ် မကြည့်ပဲ၊ ဒီတိုင်း စမ်းကြည့် လိုက်တာပါ။ နောက်မှ ကျွန်မရဲ့ MSN spaces site link ကို သွားကြည့်တော့ http://naynaynaing.spaces.live.com/ ဒီလင်ခ့်ကို redirect လုပ်သွားတာတွေရတယ်။ ခုဆို MSN Spaces ဆိုတာ မရှိတော့ ပါဘူး။ MSN Live Spaces ဆိုတာပဲ ရှိပါတော့တယ်။ထုံစံ အတိုင်း အသစ်ဆိုလို့သာ စမ်းကြည့်ချင်တာ။ ခုဟာက account ရှိပြီး သားဆို တော့ စမ်းကြည့်ဖို့စိတ်မပါတော့ဘူး။ ဘာ Feature အသစ်တွေပါ လည်းဆိုတာကိုတော့ နောက်၊ အားမှ စမ်းကြည့်တော့မယ်။ ခုတော့ ပျင်းသွားပြီ။Window Live Spaces အကြောင်း သိချင်ကြရင်တော့ အောက်ကလင်ခ့် မှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။DailyTech (Window Live Spaces)ဒါ ကျွန်မ ဖတ်ဖို့ ဆိုပြီး THKZ က ပို့ ပေးတဲ့ လင့်ခ်ပါ။ ကိုယ်ဟာကို ဆို ဘာမှ မဖတ်ဘူး။ ပျင်းတယ်။
ဒီနေ့ဖေဖေ ရန်ကုန်ပြန်သွားပြီ ဆိုတော့ နောက်ရက်တွေမှာ အလုပ်သိပ် မရှုပ်လောက်တော့ဘူး ထင်ရတာပဲ။ လုပ်စရာ ရှိတာတွေ လည်း တော်တော်ပြီး သွားပြီ၊ ဖေဖေလည်း ပြန်သွားပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် စနေနေ့ညထဲက ဖေဖေ ဒီရောက်နေတာ၊ ဒီတစ်ခေါက် ထူးထူးခြားခြား hotel မှာ မနေပဲ ကျွန်မ တို့အိမ်မှာ လာနေတယ်လေ။ သူ့ ရဲ့ သမီး ဒီမှာ နေတဲ့ Life Style ကို သိချင်လို့ တဲ့လေ။ ခုတော့ ပြန်သွားပြီး။ ဖေဖေ ဘာတွေ များ သိသွားလဲ မသိဘူး။ ဖေဖေ သိသွားမှာ သေချာတာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်၊ အဲ့ဒါက ကျွန်မဟာ ကျွန်မရဲ့ အဖေ သူနဲ့ တချို့ နေရာတွေမှာ အရမ်းကို တူနေ တယ်ဆိုတာကိုပါ။ ဟီး ဟီး။ အရင်ထဲကလည်း သိမှာပါ။ ခုတော့ ပိုသိသွားမယ်လို ထင်ရတာပဲ။ကျွန်မ က ရုပ်ရည် အရ အဖေတူ သမီး ဆို တာ ရင်းနှီး သူတိုင်းသိကြတယ်။ အဲ့ဒီလို တူနေတာက ကျွန်မ့အတွက် တစ်မျိုးကောင်းနေတယ်။ တစ်ခုခုဆို အဆူခံ ရတော့ မယ်ဆို.. "သမီးက အဖေ တူ သမီးပဲ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့" လို့သာပြောလိုက် အဖေဆူ တာကိုလုံဝ မခံရတော့ ဘူးဆိုတာ သေချာသလောက် ရှိသွားပြီ။ ဆူခံရ ခါနီးတိုင်း တင် မဟုတ်ပါဘူး၊ ကောင်းတာတွေ လုပ်ထားလို့ချီးကျူး ခံရ ခါနီးတိုင်လည်း ပြောပေးဖို့တော့ လို တာပေါ့ နော်။ဒီတစ်ခေါက် ဖေဖေ ဒီကိုလာတာ မဆိုးဘူး။ မုန့် ဖိုး ပေးပါဆိုပြီး တောင်းလိုက်တော့ ပေးသွားတယ်။ ဟီး ဟီး။ အရင် နှစ်လ လောက်က မေမေ လာတုန်းက လည်း ပြန်ခါန်ှီးမှာ မုန့် ဖိုး ပေးသွား သေးတယ်။ ခဏ ခဏ လာပြီး၊ မုန့် ဖိုး အမြဲပေးသွား ကြရင် ကောင်းမယ်။ အမေ ဒီမှာ ရှိနေတုန်း ကဆို၊ အိမ်မှာ ဘာမှ မလုပ်ရဘူး။ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်လာပြီဆို မေမေ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းကို အစဉ်သင့်လေး စားရုံပဲ။ အဝတ်လျှော် စရာလည်း မလိုဘူး၊ မီးပူလည်း တိုက်ပြီးသား၊ ဝတ်တော့မယ်ဆို အစဉ်သင့်ပဲ။ အမေကျေးဇူး များတယ်ကြီး ပါလာနော်။ ခုများကြတော့ ကိုယ့်ဟာကို အကုန်လုပ် နေရတယ်။ မေမေ ဒီမှာရှိနေတုန်း ကျွန်မ နည်းနည်းတောင်ဝ လာတယ်။ ညဆို စောစော အိပ်ခိုင်း၊ မနက်ဆို မနက်စာ စားခိုင်း၊ နွားနို့ သောက်ခိုင်းနဲ့ ဆိုတော့ ဝလာတာ ဘာဆန်းမလဲ။ အဲ့ဒီတုန်းက ဝလာတာ မဆန်းသလို ခု ပြန်ပိန်သွားတာလည်း ဘာဆန်းမလည်းနော်.. ။နွားနို့ ဆိုလို့ ကျွန်မက နွားနို့လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က နွားနို့မှန်မှန် မသောက်လို့မေမေ ဖုန်းဆက်ပြီး လှန်းဆူတာ ခံလိုက်ရသေးတယ်။ ကျွန်မ အဆူခံရတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဖေဖေ နဲ့အစ်ကို အဆူခံရတာ။ ကျွန်မ နွားနို့ မကြိုက်တာ၊ မသောက်ချင်တာ၊ အတင်းသောက်ခိုင်းရင်လည်း အကြောင်ရှာ လျှောင်ပြေးနေတာကို မေမေ သိနေတာပဲ။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်မကို မဆူဘူး၊ ကျန်တဲ့ သူတွေကို ဆူတာပေါ့။ ဟား ဟား။ ဖေဖေကလည်း သူ အဆူမခံရအောင်ဆိုပြီး၊ သူရှိနေ တဲ့ မနက်တိုင်း ကျွန်မကို အလုပ် မသွားခင် နွားနို့သောက်ခိုင်းတယ်။ ပြန်ခါနီးတော့ ကျွန်မ သောက်ဖို့ဆိုပြီး နွားနို့တွေ အများကြီးဝယ်ပေးသွားတယ်။ Full Cream တွေဝယ်ပေးတာ။ သောက်ရတာ အော်ကလီဆန်လိုက်တာ။ ကိုယ်ဟာကိုဆို Skmi အလွန်ဆုံးဝယ်တဲ့ ဟာကို၊ ခုတော့ မနက်တိုင်း အဲ့ဒီဟာတွေသောက်ပြီး အန်ချင်နေတယ်။ အဲ့ဒီဟာတွေ ကုန်ရင် အစ်ကို ကို နွားနို့အမြဲမပြတ်အောင် ဝယ်ရမယ်လို့ပြောသွားတာ ကြားတာပဲ။ စိတ်ညစ်နေတယ်။ နွားနို့အစား တစ်ခြားတစ်ခုခု ပြောင်းသောက်မယ် ပြောရမှာပဲ။ အစ်ကိုနဲ့နားလည်မှု့ ယူရအုံးမယ်။ခုတစ်လော သာမာန်ထက် ပို အပျင်းထူနေတယ်။ လုပ်စရာ လေးတွေ ပြီးအောင်လုပ်မှ ဖြစ်မယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေဖို့ ဟာလည်း နည်းနည်း ခေါင်းထဲ ထည့်ထားအုံးမှ ဖြစ်မယ်။ လူက ကြာလေ အပျင်းထူ လေဖြစ်လာ သလိုပဲ။ ကိုယ်တစ်ယောင်တည်းတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ ရှားရှားပါးပါး သူငယ်ချင်းကလည်း ကိုယ့်လိုပဲ ဆိုတော့ ဘာပဲ ပြောပြော အဖေါ်ရှိ သေးတာပေါ့။ ကိုယ်က သူ့ ထက် ပိုပျင်းတာ တော့ အသေအချာပဲ နေမှာ။ သူမှာ ဟို တစ်လောကလည်း ဘာဆိုလားလည်း မသိဘူးတတ်သေးတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လ တုန်ုးကလည်း စာမေးပွဲ တစ်ခု ဖြေတာ ခုအောင်စာရင်းထွက်ပြီ၊ အောင်သွားပြီလို့ပြောတယ်။ သူ့ ကို အားကျပြီး သူ့ လို လိုက်လုပ်ချင်စိတ် ပေါက်ရင်ကောင်းသား။ ခုတော့ အဲ့ လို စိတ်ကူး မပေါက်ပဲ သူ့ ကို မုန့် လိုက် ဝယ်ကျွေးခိုင်း ချင်စိတ်ပေါက် နေတယ်။ ( မုန့် ဝယ်ကျွေး မလား။ )ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်တုန်းက သူငယ်ချင်းစီက လက်ဆောင်ရတယ်။ သူဘန်ကောက်က ဝယ်လာတာ ဆိုပြီးပေးတာ။ နောက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ရန်ကုန်ကနေ (The Waves) magazine နှစ်စောင်နဲ့ ၊ journal တစ်စောင် ဝယ်လာ ပေးတယ်။ နောက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အထိမ်းအမှတ် တစ်ခု အတွက် ရှေ့အပတ်မှာ မုန့် လိုက်ကျွေးမယ်ပြော ထားတယ်။ ခု ဆုတောင်းရင် သူငယ်ချင်းတွေ ခရီးများများ သွားရပါစေ၊ ရန်ကုန် ခဏ၊ခဏ ပြန်ကြ ပါစေ၊ အောင်မြင်မှု့တွေ များများ ရကြ ပါစေ လို့ ပါ ထဲ့ပြီး ဆုတောင်းရမလို ဖြစ်နေုပြီ။ ရှိသေးတယ် အစ်ကို စာမေးပွဲ မြန်မြန် အောင်ပါစေ၊ ဖေဖေ နဲ့မေမေ စီက မုန့် ဖိုး များများရပါ စေလို့ ပါထဲ့ ဆုတောင်း ရမယ်။ ပြောသာ ပြောတာ ဘုရားမှာ ဆုမတောင်း ဖြစ်တာ တောင် အတော်ကြာပြီ။ဘာရေးစရာ ကျန်သေးလဲ။ မရှိတော့ဘူး ထင်တယ်။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ အိပ်သင့်ပြီ။ ကောင်းသော ည ပါ။
8/03/2006 11:28:00 AM
ဒီနေ့နားထောင်ဖြစ်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သွားတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်..Background Song of Democratic Federation of BurmaDownload Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
8/01/2006 02:22:00 PM